Tirtirida feylal badan qaabka ugu fudud MC | Laga soo bilaabo Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Aplicaciones, GNU / Linux, Lagu taliyay, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
MC (Taliyaha Saqdii dhexe) waa aalad awood badan oo ay abuurtay Miguel de Icaza (haa, isla abuuraha Gnome) kaasoo leh shaqooyin badan. Qodobkaan waxaan kaga faalloonayaa midkood.
Waxaa ii soo baxday in saaxiibkey uu ii soo jeestay maxaa yeelay xusuustiisa waxaa ka buuxay fayrasyo. Xusuusta gudaheeda wuxuu ku lahaa in ka badan 30 fayl oo wata foldaarado hoose oo mid kasta oo ka mid ah, fayrasku wuxuu ku reebay fayl is-fuliya oo sida uu sheegay mar kasta oo uu tirtiro, way soo baxaan markale
Ma qiyaasi kartaa in aad tirtirto fayl kasta oo fayl ah adigoo galka kujira? Waan ognahay inay jiraan siyaabo kale oo loo raadsado feylasha kumbuyuutarka oo la tirtiro waxa aan dooneyno, laakiin fikradda ayaa ah in si sahal ah loo sameeyo. Taasi waa sababta aan u isticmaalno MC. Codsigan kuma imaan karo wax iska caadi ah wax walboo disto ah (ceeb run ah) markaa waa inaan marka hore rakibnaa.
Waxaan fureynaa terminal oo aan la galnaa MC aaladda USB, kaas oo loogu yeeri doono Flash Driver, tusaale ahaan:
oo xagee ku qorantahay Archives waxaan ka saari * oo waxaan u dhignaa magaca waxa aan dooneyno inaan tirtirno, tusaale ahaan .Tumbeyaasha, Faylasha nacaybka ah ee ay soo saareen Windows. Dabcan waan isticmaali karnaa xiddig-xiddig si aan u shaandheyno raadinta, tusaale ahaan: * Suulka o Suulka *.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Tirtirida feylal badan qaabka ugu fudud MC
Faa'iido badan ayey leedahay markaad ogaato feylasha aad tirtirto lol…. Waa maxay kuusaska farxadda leh? Marwalba waan arkaa waana masaxaa laakiin wali ... mahadsanid caarada
Faylka thumbs.db waa kayd si loo abuuro aragtiyo thumbnail ee sawirada Windows cabirkiisuna maahan in dib loo xisaabiyo markasta oo isticmaaleyaashu furaan tusaha ay ku jiraan.
Wax fudud ...
feyl ahaan $ (hel-magac "* .exe"); samee feyl rm $; samee
Waxaan u badalnay "* .exe" qaabka faylka 😛
Ku jawaab nekophagous
Talooyin aad u fiican .. 😀
MC Waan jeclahay barnaamijkaan yar mana aanan aqoon cida abuurtay 😀
MC waa kan ugu fiican, waxaan isticmaalayay ku dhowaad 4 sano aniga ahaanna wax siman ma leh! In kasta oo ay aniga i dhibayso in [keydku] aanu soo ururin qormada 'salao' si loogu xidho saamiyada samba ...
Qalabkan yari waa mid cajaa’ib leh weligayna tan iyo markii aan helay weligayba waan isticmaali jiray. Waa hab aad u fiican oo looga shaqeeyo terminaalka; jidka agtiisa, haddii midkiinba adeegsado MS-DOS, waxaad ogaan doontaan inuu sidoo kale jiray codsi la mid ah, oo loo yaqaan Norton Comander oo sida MC ay u tahay wax cajiib ah.
Maxaa xusuus ah !! Markii aan la kulmay Taliyihii Norton waxay ahayd sidii inaan mar kale dhalan, ha! Waxaan durba rakibayaa MC-ka.
U jawaab Xeber
Sida loo dejiyo asalka faylkeena caadiga ah